Ny toetrandro any Kolombia | Fitsangatsanganana tanteraka
Isabel | | Kolombia
Iray amin'ireo lafiny tsy ampoizina ireo mpandeha mitsidika an'i Colombia voalohany ny fitoviana amin'ny toetrany mandritra ny taona. Ny antony dia ao amin'ny faritra ekoatera no misy ny firenena, noho izany dia tsy iainana ny vanim-potoana toy ny any amin'ny ankamaroan'ny firenena eto an-tany ary tsy miova ny ora fiakaran'ny masoandro na filentehany.
Kolombia dia firenena manana fahasamihafana goavana amin'ny lafiny toetr'andro, manomboka amin'ny hafanana mangatsiaka ka hatramin'ny toetr'andro tropikaly. Manana vanim-potoana roa lehibe izy: ny iray maina (manomboka amin'ny Desambra ka hatramin'ny Janoary ary hatramin'ny Jolay ka hatramin'ny Aogositra) ary ny iray mando (manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny mey ary hatramin'ny oktobra ka hatramin'ny novambra). Fa ny voalaza etsy ambony dia tsy midika hoe mitovy ny toetrandro any Kolombia. Raha ny marina, ny karazana topografika lehibe dia manome ny firenena an-tany maro an-tanety, gorodona mafana ary biodiversité.
Mazava ho azy, noho io karazany io, ny mpitsangatsangana dia manana fotoana hisafidianana fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Colombia arakaraka ny tiany na mafana na mangatsiaka. Raha mazava ny momba ny fotoana handehanana any amin'ny firenena dia tsara kokoa ny mamantatra momba ny mari-pana mety ho sendra anao mba hiomanana amin'ny toe-javatra mety hitranga.
1 Inona ny toetr'andro any Colombia?
2 Inona no fotoana mety indrindra handehanana any Kolombia?
Inona ny toetr'andro any Colombia?
Toetr'andro mafana: Amin'ny faritra misy an'ity toetrandro ity dia mihoatra ny 24 ° C ny hafanana, toy ny mitranga any Pasifika (toerana ahafahanao mijery trozona humpback) any amin'ny morontsirak'i Karaiba (toerana misy ny Valan-javaboary Nasionaly Tayrona ary toerana misy ny karnavaly malaza an'ny Barranquilla) ary San Andrés (toerana misy morontsiraka mahafinaritra hijerena sy hanao spaoro rano hafa).
Toetran'ny toetr'andro: Ny mari-pana dia eo anelanelan'ny 17 ° C sy 24 ° C amin'ny faritra toa an'i Cali (tranon'ny foara malaza Cali) ary any Medellín (toerana anaovana ny Fair Flower).
Toetrandro mangatsiaka: Amin'ny faritra misy an'ity karazana toetrandro ity, ny mari-pana dia eo anelanelan'ny 12 ° C sy 17 ° C. Izany no tranga misy an'i Bogotá, renivohitr'i Kolombia. Tanàna mampifangaro ny fomban-drazana sy ny maoderina fantatra amin'ny anarana hoe Athens of America South. Fitsidihana tena ilaina hatao any Bogotá ny tranom-bakoka Gold. Tena ilaina ny mianatra momba ny sivilizasiona taloha taloha sy ny angano malaza an'ny El Dorado.
Nijanona izahay: Any amin'ireo faritra ireo, ny mari-pana dia eo anelanelan'ny 6 ° C sy 12 ° C. Izany no zava-misy ao amin'ny Chingaza National Natural Park, harena voajanahary miorina ao Atsinanana Cordillera any amin'ny faritr'i Andean any Kolombia. Ireo karazan-jaza toy ny condors, bera Andean ary serfa fotsy volo no monina eto.
Faritra glasiôna: Ny mari-pana ambanin'ny 6 ° C dia iainana eto. Izany no tranga any Sierra Nevada de Santa Marta, miorina ao avaratr'i Kolombia amin'ny morontsirak'i Karaiba, izay ahafahanao mandeha mitsangatsangana.
Ala tropikaly: Miaraka amin'ny maripana mihoatra ny 27 ° C, mando sy mafana ny ala tropikaly. Toy izany ny tranga any amin'ny morontsiraka Pasifika, ny vilanin'i Magdalena sy Catatumbo ary i Amazon, ny ala manankarena indrindra sy manan-karena indrindra eto an-tany izay ahafahanao mankafy ny toetra mampientanentana. Be ny orana mandritra ny taona, ary volana volana martsa izy ireo rehefa mahatratra ny sandany farany. Na izany aza, ny rotsakorana kely indrindra dia eo anelanelan'ny volana Jona sy septambra. Noho izany, noho ny orana kely kokoa, ny volana Jolay sy Aogositra no fotoana mety indrindra handehanana any Amazon.
Tropikaly Steppe: Mampiavaka azy ny rotsakorana rotsakorana, ny hafanana be ary ny zavamaniry voafetra ao aminy. Ohatra roa ny tany efitra Candelaria any Boyacá na La Guajira, izay mampiavaka azy ireo dongom-pasika lehibe sy ny tandavan-tany efitra. Eto ianao dia afaka mitsidika ranchería hahitanao ny kolontsain'ny vazimba teratany Wayuu.
Toetr'andro Savannah: Manatrika any Orinoquia, Bolívar, Avaratry Huila ary afovoan'i Cauca Valley. Mampiavaka azy ny vanim-potoana maina sy orana, miaraka amin'ny ahitra ahitra.
Toetr'andro orana: Manatrika ao Caquetá, Vaupés, ampahany amin'ny Antioquia sy Córdoba. Ny orana ambany, ny fiovaovan'ny mari-pana ary ny zavamaniry ala tsy matevina.
Inona no fotoana mety indrindra handehanana any Kolombia?
Ny fotoana tsara indrindra handehanana any Kolombia dia miankina amin'ny faritra tianao hotsidihina amin'ny fialan-tsasatrao. Ny firenena dia manana fahasamihafana topografika lehibe izay voadika amin'ny karazana velaran-tany, zava-boary ary toetr'andro.
Ohatra, Any amin'ny faritra Andesana ny fotoana mety indrindra hahalalana ity toerana ity dia ny volana Jolay sy Aogositra satria mandritra io vanim-potoana io dia misy mari-pana mafana sy orana kely, izay mety amin'ny dia. Amin'ity fotoana ity dia tsy maintsy ampidirinao ao anaty valizinao ny akanjo mafana (satria mangatsiatsiaka amin'ny filentehan'ny masoandro izy ary mangatsiaka ny alina). Soso-kevitra ihany koa ny hitondra tabilao-masoandro, satria ny haavon'ny faritra dia mety hahatonga anao handoro mora foana na dia tsy dia avo loatra aza ny mari-pana.
Mba handehanana any amin'ireo tanàna any amin'ny manodidina an'i Amazon toa an'i Leticia, ny fotoana mety indrindra dia ny volana Jolay sy Aogositra satria na dia misy aza ny orana dia mafana ihany koa mandritra ny taona any amin'ny morontsiraka avaratry ny Pasifika. Ny fandehanana any amin'ny morontsirak'i Pasifika atsimo amin'ity volana ity koa no mety indrindra. Ary koa, ny volana Jona sy septambra dia mety hitsidika ity faritra ity. Eo anelanelan'ny Desambra sy aprily no fotoana mety hitsidihana ny morontsirak'i Karaiba.
Raha te-ho any Kolombia ianao hankafy ny fahitana voninkazo dia mila mandeha amin'ny fiandohan'ny vanim-potoana orana ianao satria amin'ny farany dia mety hisy tondra-drano amin'ny faritra sasany amin'ny firenena. Ny maningana dia ny faritra manodidina an'i Bogotá sy ny morontsirak'i Karaiba.
Ary koa, eo am-panomanana ny dianao mankany Colombia dia tsy maintsy tadidinao fa raha avo kokoa ny faritry ny firenena halehanao dia lasa mangatsiaka kokoa ireo tany ireo. Ohatra, ny tampon-tendrombohitra dia rakotry ny lanezy amin'ny haavo 4.500 metatra. Amin'ity fampahalalana rehetra ity momba ny toetrandro any Colombia dia ho vonona ianao hanomboka ny dianao any amin'ity firenena amerikana atsimo mahafinaritra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny toetrandro any Kolombia
Lapa lehibe indrindra eto India
Ny angano an'i Hans Brinker